Oracle ဆယ်တင်ရေးကိရိယာ Oracle DBF Repair & Recovery Software များ။
DataNumen Oracle Recovery အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး Oracle DBF ကမ္ဘာပေါ်မှာပြုပြင်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး tool ကို။ ဒါဟာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုပြုပြင်နိုင်ပါတယ် Oracle DBF database ဖိုင်များနှင့်၎င်းတို့ထဲရှိအခြားအရာများအားလုံးကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရယူပြီးဖိုင်ဖောက်ပြန်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Oracle Recovery?
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Oracle Recovery v1.0
ဗားရှင်းအားလုံးကိုပံ့ပိုးပါ Oracle ဒေတာဘေ့စ DBF ဖိုင်များကို။
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု DBF floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
တစ်သုတ်ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု DBF ဖိုင်များကို။
Windows shell နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက်သင်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည် DBF Explorer menu ထဲက context menu နဲ့ file ကိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Oracle Recovery အဂတိလိုက်စားမှုကိုပြန်လည်ရယူရန် Oracle ဒတောဘေ့စျ
ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ DBF ဖိုင်များပျက်စီးသည် (သို့) ပျက်စီးသည်၊ ၎င်းကိုသင်ပုံမှန်ဖွင့ ်၍ မရပါ၊ သင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen Oracle Recovery စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် DBF ဖိုင်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှသူတို့ထံမှဒေတာများပြန်လည်ရယူပါ။
မှတ်စု: မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမပြုမီ DBF ဖိုင်တွဲများ DataNumen Oracle Recoveryကျေးဇူးပြု၍ ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သောအခြားအပလီကေးရှင်းများကိုပိတ်ပါ DBF ဖိုင်များကို။
ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားမှုကိုရွေးချယ်ပါ DBF ပြန်လည်ရယူရန်ဖိုင်
သင်ထည့်နိုင်သည် DBF ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ရှာရန် button ကို DBF ကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်ဆယ်တင်လို့ရတဲ့ဖိုင်ကို။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen Oracle Recovery အဆိုပါပြန်လည်ကောင်းမွန်ကယ်တင်လိမ့်မည် DBF xxxx_recovered အမည်အသစ်ဖိုင်သို့ဖိုင်ကို။DBFxxxx သည်ရင်းမြစ်၏အမည်ဖြစ်သည် DBF ဖိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရင်းအမြစ်အဘို့ DBF USERS01 ဖိုင်DBFပြန်လည်ရယူထားသောဖိုင်အတွက်ပုံသေအမည်မှာ USERS01_recovered ဖြစ်သည်။DBF။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ထည့်ပါ။
ခလုတ်နှင့် DataNumen Oracle Recovery အလိုလိုtarအရင်းအမြစ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးပြန်ဆယ်တင်ခြင်း DBF ဖိုင်။ တိုးတက်မှုဘား
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်အရင်းအမြစ်လျှင် DBF ဖိုင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်ဆယ်တင်နိုင်ပါပြီ၊ သင်ဤကဲ့သို့သောစာတို box ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အခုသင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီ DBF အတွက် file Oracle.
DataNumen Oracle Recovery 1.0 ကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ပျက်စီးနေသော Microsoft ကိုပြုပြင်ပါ SQL Server MDF databases ကို။